Maitiro ekufambisa kubva kuMacOsX kuenda kuOpensuse 12.3 pasina kukanganisa. | Kubva kuLinux
Maitiro ekufambisa kubva kuMacOsX kuenda kuOpensuse 12.3 pasina kukanganisa.
Mi Mac Mini Iyo iri 32-bit uye ini handichina mukana wekuisa iyo nyowani Apple anoshanda masisitimu kunyangwe ini ndichine rutsigiro rwe Snow Leopard.
Ini ndinoda KDE 4 zvakanyanya uye zvakanyanya uye kazhinji mapurogiramu anozivikanwa kwazvo eMacOsX anozove makumi matanhatu neshanu chete munguva pfupi, saka ndakafunga kukwira kuenda kuGNU / Linux uye yangu yakasarudzwa distro OpenSuse, nekuda kwekunaka kwayo, nyore, simba uye kugadzikana. Aya ndo maitirwo andakaita ...
Kutanga isu tichaisa REFIT uye kana tichida kopi yekuchengetedza, isu tinoshandisa Carbon Copy Clonner, mukati meMacOsX.
Kana isu tichida kukanganwa nezveMacOsX zvachose, isu ticha fomati diki uye dangwe re USB tambo yatinayo neMac's "Disk Utility", neiyo HFS + faira system (izvi zvinogadzira tafura yekuparadzanisa GPT). Uye isu tinoteedzera iyo folda "efi" mune yakambo fomatiwa Pendrive. Mukati mefaira mune script inonzi enable.sh. Tichaimhanyisa semudzi kuti tione kushanda kwakakodzera kweREFIT. Zvichava zvinobatsira kusarudza iyo yekuisa midhiya zviri nyore mune ramangwana kuiswa kana kugadzirisa.
Imwe sarudzo ingave yekugadzira chidimbu chidiki neiyo HFS + faira system uye iine "efi" dura ipapo, ipapo tinogona kumisikidza REFIT sekuda kwedu; Asi hazvimborwadzise kugona kubhurawuza kubva kuUSB pasina kuita musanganiswa wakasarudzika watisingazomborangarira nekuti isu hatishandise nguva dzose.
Kana isu tichida kuchengeta iyo MacOsX kuisirwa, isu tinoshandisa yekunze hard drive yakakura zvakakwana kudzorera iyo yese system neCarbon Copy Clonner.
Isu takagadzirira kuisa Opensuse kubva kuDVD kana Pendrive. Kuti tiite izvi, isu tinorekodha iyo ISO mufananidzo ne «Disk Utility» tichishandisa optical drive, kana isu tinonongedza zvakananga mufananidzo weIO nemutemo we dd tichishandisa MacOsX koni.
Zvingave zvakafanira kuita:
sudo dd kana = kuvhuraSUSE-12.3-DVD-i586.iso ye = / dev / disk1
Izvo zvakaenzana zvingave sda ​​= disk0, sdb = disk1, zvichingodaro.
Iye zvino tichaona kuti patinotangazve, REFIT inoziva iyo yekumisikidza svikiro, ingave yemaziso kana USB, uye isu tinogona bhuti pasina matambudziko kuenderera nekumisikidza.
Isu tinoteedzera nhanho dzekumisikidzwa kuisirwa Opensuse 12.3, mune ino kesi ndichaiisa mu / dev / sda, ine otomatiki kupatsanura.
Ini handina kumbofanira kuchinja tafura yekuparadzanisa kana kuita chero chinhu chakakosha kuisa openSUSE mukati meMac Mini ine processor yeCore Duo.
Ndinovimba kuti unokurudzirwa kuenda kuGNU / Linux pane kuchinja makomputa nekuti mugadziri anofunga kuti inguva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Maitiro ekufambisa kubva kuMacOsX kuenda kuOpensuse 12.3 pasina kukanganisa.
Ini ndinonzwa kuti yakanyanya kutsva kwandiri, yangu makumi matatu nemaviri uye wifi inozviona pasina matambudziko.
Asi iwe unogona kuyedza izvi kana usati watove:
sudo zypper gadza b43-fwcutter
sudo / usr / sbin / kuisa_bcm43xx_firmware
sudo apt-tora kuisa firmware-b43-installer
Kana kunyangwe kurodha pasi madhiraivha eanogadzira.
Tarisa uone iri peji muChirungu:
VhuraSUSE kunyangwe iri yakanakisa kugovera, ini ndaigara ndine matambudziko kana kuiisa kana post-kuisirwa, ini ndaikurudzira kuti iwe uedze Pear OS 7
Kana iwe usiri kuziva kugovera uku, usamire kuzviedza uye kana iwe wakatozviedza iwe unogona ikozvino kuve neyazvino vhezheni: Pear OS 7
Kana iwe uri kutsvaga kutanga neLinux uye iwe unobva kuMac, iwe uchada Pear Linux. Uye kana iwe uchida chimiro cheMac OS X asi uchisarudza kushandisa Linux, uine Pear Linux iwe uchasunungura maquero / linuxero yaunotakura mukati.
Mamwe ruzivo uye kurodha kushanyira: http://germanlancheros.blogspot.com.ar/2013/04/disponible-pear-linux-7-64-bits-y-server.html
Wakamboshandisa Mac here?
Carlos Luna akadaro
ndine hurombo, iniwo ndafunga kutamira kune linux pane yangu macbook pro 2011 asi handikwanise kuitora kuti ndione vatyairi vewifi, chii chandingaite?
Pindura carlos luna
Ndinofanira kubvuma kuti ndanga ndiri mushandisi weMacOSX kwenguva yakareba pamwe neGNU / Linux, nguva pfupi yapfuura ndakaramba ndichiishandisa kugovera internet sekunge yaive router, ikozvino ndinoita zvese neGNU / Linux 😉 ndicha nyora inoenderana posvo, uchitsanangura mabatanidziro maviri emagetsi kugoverana internet neGNU / Linux, inova OS yangu yandinofarira uye nekuwedzera uye nekuwedzera, uye zvese zvandakadzidza kubva kuMac ini ndave nechikwereti kuGNU / Linux.
Vhara Lucasarts, sunungura Jedi Outcast uye Jedi Academy kodhi